Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shir isugu yeeray Safiirada dalalka caalamka -
HomeWararkaWasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shir isugu yeeray Safiirada dalalka caalamka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shir isugu yeeray Safiirada dalalka caalamka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kulan ay Albabada u xiran yihiin waxa uu xerada Xalane kula yeeshay Safiirada dalalka Caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho, isagoo kala hadlay xaaladaha soo Korodhay.
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulan maanta ka dhacay Gudaha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo uu la qaatay Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka Suudan, waxaana uu sheegay in dhammaan Safiiradda ay isla garteen in la taageero heshiiskii dhawaan ay gaareen Golaha Milatariga Suudan iyo Kooxda Banaanbaxyadda wadda.
Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto Sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka Suudaan, islamarkaana Ururka Jaamacadda uu ku dadaali doono in dowlad buuxda laga dhiso dalka Suudaan.
Wasiirka Cawad oo uu ku dheeraaday Sababtii dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay dalka Guinea waxaana uu sheegay in dowladdaasi ay si cad ugu xadgudubtay Soomaaliya Qaranimadda, islamarkaana qeyb ka mid ah Soomaaliya ay Casuumaad dal ahaan ah ay u fidiyeen.
Waxaa uu sheegay in sababta ay arintaasi u gaareen ay tahay in dal walba uu ixtiraamo Qaranimadeena.
Waxaa uu xusay in go’aanka xiriirka loogu jaray uu yahay mid laga baaran degay, islamarkaana Waqti badan laga fakiray.
Waxaa uu sidoo kale qiray iney jiraan dalal dhowr ah oo maleegayo tallaabooyin ka dhan ah Madax banaanida dalkan, balse ay digniino dhowr ah u direen, wixii haatan ka dambeeyana aan wax dulqaad ah loo yeelan doonin.
Waxaa uu xusay Wasiir Axmed Ciise Cawad in dowadda Soomaaliya ay Somaliland u aaminsan tahay in ay ka mid ah tahay dhulka Soomaaliya, ayna jiri karin dowlad u sameyn karta Maqaamka dowladeed ee Soomaaliya oo kale.